यी ४ राशिका महिलाले जहिले पनि आफ्नो पतिलाई दबाएर राख्छन् – Kumbha Khabar
On १७ असार २०७६, मंगलवार ०७:५५
एजेन्सी : विवाहलाई एक प्राकृतिक परम्पराको रुपमा हेरिने गरिन्छ। एक वंशलाई अगाडी बढाउनको लागि विवाह गर्ने गरिन्छ। हरेक परिवारको जहिले पनि एउटी चिन्ता रहने गर्छ कि परिवारमा आउने बुहारी कस्तो पर्छन् भन्ने। हरेक परिवार शान्त साथै भनेको सबै मान्ने बुहारी चाहने गर्छन्। हरेक फरक राशि भएका व्यक्तिको फरक बानी मात्र नभई व्यहोरा समेत फरक हुने गर्छ। एक युवती विवाह पछि आफ्नो जन्म घर छोडेर कर्म घरमा आउने गर्छिन् भने उनको पहिलो प्राथमिकता कर्मघरलाई खुसि दिने तर्फ केन्द्रित रहने गर्छ।
नेपालीको प्राय घरमा सासु-बुहारी बिचको सम्बन्धलाई लिएर धेरै कुराहरु चल्ने गर्छन्। कोहीको सासु-बुहारी धेरै मिल्ने गर्छन् भने कोहीको भने खासै नमिल्ने गर्छन्। यस किसिमको सम्बन्ध स्थापित गर्नको लागि राशिले धेरै भूमिका खेल्ने कुरा ज्योतिष शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ। ज्योतिष शास्त्रका अनुसार निम्न उल्लेखित राशि भएका महिलाहरु धेरै भाग्यमानी हुने गर्छन्। साथै यस राशि भएका महिलाहरु जिद्दी समेत हुने गर्छन्। जसका कारण यस राशि भएका बुहारीहरु आफ्नो कर्मघरमा राज गर्ने गर्छन्।
१. कर्कट राशि ‍- जिद्दी हुने भएता पनि यस राशिका महिलाहरु अरुलाई सजिलै मनाउन सक्ने क्षमता राख्ने गर्छन्। घर-परिवारमा हुने हरेक कार्यको निर्णयमा पनि आफू प्रतिनिधित्व गर्ने गर्छन्। आफ्नो पतिलाई मनाउन पनि खप्पिस हुने गर्छन्। जसको कारण आफ्नो कर्म घरमा कर्कट राशि भएका बुहारीले राजनै गर्ने गर्छन्।
२. कन्या राशि – आफ्नो पतिलाई सजिलै काबुमा राख्ने क्षमता भएका कन्या राशिमा महिलाहरु आफ्नो कर्मघरमा आफ्नो उपस्थितित बलियो रुपमा प्रस्तुत गर्ने गर्छन्। आफ्नो पतिलाई नियन्त्रणमा राख्नको लागि साम, दाम, दंड, भेद सम्पूर्ण प्रयोग गर्न पछाडी नहट्ने यस राशिका महिलाहरु आफ्नो कर्मघरलाई स्वर्ग बनाउन हरेक कदम चाल्ने गर्छन्।
३. सिंह राशि – व्यवहारमा अत्याधिक जिद्दी मानिने यस राशिका महिलाहरु आफ्नो पतिलाई जिद्दीलेनै नियन्त्रणमा राख्न सक्षम हुने गर्छन्। कर्मघरमा हुने हरेक कार्यमा आफ्नो संलग्नता कायम राख्न खप्पिस हुनाले आफ्नो कर्मघर्मा राजनै गर्ने गर्छन्। यस राशिका महिलाहरुसँग हरेक परिस्थितिमा आफ्नै तरिकाले समस्याको समाधान गर्ने पनि खुबी हुने गर्छ।
४. वृश्चिक राशि – जुनै पनि अफ्ठ्यारो परिस्थतिमा रुष्ट रहेका व्यक्तिलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सक्ने यस राशिका महिलाहरु आफ्नो पतिलाई पनि आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने गर्छन्। पतिको कुरा सुन्दै परिवारमा राज गर्ने यस राशिका महिलाहरु आफ्नो कुरा राख्न अलिकति पनि नडराउने गर्छन्। परिवारको हरेक कार्यमा आफै संलग्न भएर हावी हुने आदतनै हुने गर्छ वृश्चिक राशि भएका महिलाहरुको।